apple inovhura zviri pamutemo iphone 12 pro uye pro max
Kuru Nhau & Ongororo Apple inovhura zviri pamutemo iPhone 12 Pro uye Pro Max
Apple ichangobva kuvhura zviri pamutemo maPhones mana matsva, akanyanya pachiitiko chimwe chete, uye pakati pavo tine mhando mbiri dzekutanga, iyo iPhone 12 Pro uye iyo huru hombe iPhone 12 Pro Max.
Gore rino & apos; s Pro mamodheru anoratidzira chinyowani dhizaini ine mativi akapfava, kutora kwazvino pakuonekwa kwechiratidzo kweiyo iPhone 4, uye ivo zvakare vanounza akavandudzwa masystem kamera ne zoom iri nani uye vakagadzirwa neanoshamisira LiDAR sensor kubata zvirinani kubata yakawedzera chokwadi maapuro nemitambo. Uye hongu, iwe une rutsigiro rweiyo nyowani uye nekukurumidza 5G netiweki mune bhodhi futi!
Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda nezve mamwe maPhones maviri akavhurwa neApple, tarisa apa:
iPhone 12 kuburitsa zuva, mutengo, maficha uye nhau
iPhone 12 Pro uye 12 Pro Max: pfupiso yekukurumidza
Iyo nyowani iPhone 12 Pro mhuri
Iyo iPhone 12 Pro inoratidzira 6.1-inch kuratidza (yakati kurei kupfuura iyo 5.8 'pane iyo iPhone 11 Pro) uye inotanga pamutengo we $ 1,000, uye inosvika muApple & apos; s matatu siginecha mavara: sirivheri, graphite, uye goridhe, se pamwe neyechina, nyowani nyowani sarudzo sarudzo, yemhando yeblue. Kuchengeterwa kweiyo base modhi ndeye 128GB, uye iwe unogona zvakare kutenga iyo 256GB uye ne512GB shanduro.
iPhone 12 Pro vs 12 Pro Max specs uye misiyano: Zviyero: 146.7 x 71.6 x 7.4 vs 160.8 x 78.1 x 7.4mm
Zviratidzo: 6.1 'OLED skrini vs 6.7' OLED skrini
Chips: Apple A14 pane ese ari maviriKuchengetedza: 128G / 256G / 512GMakamera: Quad kamera masisitimu neLiDAR, yakareba 2.5X zoom lens paMax, hombe kamera kamera pane MaxKubatana: 5G rutsigiro pane ese ari maviriHupenyu hweBattery: 17 maawa ekutamba vhidhiyo pa12 Pro, maawa makumi maviri ekutamba vhidhiyo pa12 Pro Max
Apple A14 Bionic: iyo inokurumidza chip pane chero smartphone
Imwe yenyaya dzinonyanya kufadza pane iyo spec sheet ndiyo itsva A14 chip. Apple yakasimudza chifukidziro pachayo 5nm A14 chip mwedzi wapfuura payakazivisa kuti processor imwecheteyo ichapa simba iyo iPad Air 4, uye yakataura zvakare kuti processor yacho ine simba-kuita uye kuita zvirinani pane yatove indasitiri-inotungamira kuita kweiyo 7nm A13 Bionic yakashandiswa muiyo iPhone 11 nhevedzano.
Pfupiso yezvinhu zvitsva muiyo iPhone 12 Pro akateedzera Zvino, Apple yakazivisa iyo A14 ine 11.8 bhiriyoni transistors, kuwedzera kweingangoita 40% pamusoro peA13. Yayo CPU performance inosvika ku50% nekukurumidza kupfuura chero imwe smartphone, GPU zvakare iri 50% nekukurumidza, uye Apple yakarovawo ML kuita ichiwedzera huwandu hwema cores muNeural Injini kubva pa8 kusvika pa16.
iPhone 12 Pro Ruvara
Sirivheri Graphite Ndarama Pacific Bhuruu
Iyo iPhone 12 Pro akateedzana don & apos; haina kuuya mumavara mazhinji seayo anodhura iPhone 12 mini uye gumi nemaviri mamodheru, asi iwe unowana imwe yakasarudzika Apple colorways - sirivheri,grey nzvimbographite, uye goridhe - pamwe neiyo nyowani nyowani 'pacific bhuruu' sarudzo. Iyo bhuruu vhezheni rudzi rweyevhuruu yebhuruu inotaridzika kuva yakanaka, asi zvakare yakasarudzika uye yakadzikiswa zvishoma, nepo goridhe racho richinyanya kufadza sezvo richienda kune imwe mhedzisiro: rinotaridzika rakatsiga gaudy uye Apple yakataura mashanduriro aakaita kupedzisa kuve kupenya uye kupenya. Nenzira, iyo Pro akateedzana iPhones anoshandisa yekuvhiya-giredhi isina simbi yesimbi uye kwete aluminium senge inodhura iPhone 12 mamodheru.
Ceramic Shield ndiyo girazi rakaomesesa rakamboshandiswa pafoni
Musana wacho unogadzirwa negirazi ine matte kupera uye inoratidzika kunge yakanaka chaizvo. Asi iyo nyaya hombe iri yegirazi rekumberi girazi, rinova nyowani nyowani. Apple yakabatanidza izvi naCorning uye vanoidaidza kuti 'Ceramic Shield', ichiti iyi ndiyo girazi rakaomesesa rakamboshandiswa mu smartphone. Semazuva ese, Apple yakataura mashoma mashoma mazwi nezve maitiro uye girazi iri rinoshungurudzwa nhanho nyowani yekupisa-tembiricha, asi mhedzisiro ndeyekuti iwe unosvika kusvika ku4X zvirinani kudonha kuita.
Kana ari iwo mavara, zvingave zvakanaka kuve neakanakisa matema kana matsvuku shanduro dzatakaona kubva kuApple mune mamwe mamodheru pane Zvakanakira futi, asi maiwe, aya ndiwo mana mavara epamutemo aunogona kusarudza kubva.
iPhone 12 Saizi Kuenzanisa
Sezvo isu tine hukuru hutsva apa, regai & maapos atarise maitiro eiyo iPhone 12 Pro uye Pro Max saizi inofananidzwa neyakaenzana gore rapfuura & apos; s iPhone 11 Pro uye Pro Max:
Enzanisa idzi nedzimwe foni uchishandisa saizi Kuenzanisa chishandiso.
Nhare mbiri nyowani dzakati kurei kupfuura pakutanga, asi kuwedzera kune mwero kwehukuru hwepanyama kunounza kuvandudzika kunooneka munzvimbo yechiratidziri.
iPhone 12 Pro makamera
Mitengo pane iyo iPhone 12 Pro akateedzana hasn & apos; haina kuchinja kubva gore rapfuura
Apple iri kugadzira zvimwe zvakakosha kumakamera pane iyo iPhone 12 Pro akateedzana. Izvo zvakare ichiri kusanganisira telephoto zoom lenses chete paPro akateedzana maPhones sezvo mamodheru anodhura asingape & apos; isina kamera yakazvitsaurira kamera.
Heano makamera auri kuwana pane iyo iPhone 12 Pro mhuri:
12MP main camera ine nekukurumidza, f1 / .6 aperture, Apple & apos; s yekutanga 7-element lens pane ese ari maviri. Pro Max, zvisinei, inoshandisa yakakura senji pane iyo Pro (1.7-micron pixel saizi paPro Max vs 1.4-micron saizi paPro), uye ine sensor nyowani yekuchinja kugadzikana.
12MP Ultra-yakafara kamera
12MP 2X telephoto zoom pane 12 Pro (52mm), 2.5X zoom 12 Pro Max (65mm)
Smart HDR 3 inoburitsa hupfumi hwakadzika Iyo 65mm lens iri paMax inobvumidza kuona ruzivo pasina kuswedera padhuze
Ikozvino pane chikonzero chekuenda kune yakakura Pro Max kunze kweiyo saizi chete: iyo huru kamera pairi ine yakakura senji uye yakazara zvachose sisitimu yeOIS, inonzi sensor switch, iyo inoshanda kugadzikana kune iyo sensor pane iyo inorema lens . Izvi zvinodzima kukanganiswa kwepasi uye kwakakwirira, sekufamba kwemaoko kana kufamba mumotokari.
Kune zvimwe zvese, makamera ari paPro nePro Max akafanana: iwe une iyo nyowani Smart HDR 3 pane ese ari maviri, izvo zvinounza zvakadzama kumeso kana zuva rakajeka kuseri kwemunhu uye rinotora zvirinani HDR mapfekero akazara. Night Mode pane ese ari maviri zvakare anova nani: iko zvino kwave kuwanikwa pane ese makamera, kusanganisira iyo yekupedzisira-yakafara uye kumberi makamera.
Iyo itsva LiDAR sensor inogona kuona murima uye inouya inobatsira kune nekukurumidza AF mune yakaderera mwenje, uye izvi zvinoshanda kune ese ari maviri mapikicha nemavhidhiyo. Autofocus mune yakaderera mwenje mifananidzo inovandudzwa nekusvika kusvika ku6X nguva. LiDAR zvakare inovandudza hudzamu hwehusiku modhi, yekukura bokeh.
Saka nepo inozivikanwa 3-nzira kamera system kubva gore rapfuura & apos; s iPhones yasara, chii & apos; s itsva inzwa yechina inoratidzika kuseri kweiyo iPhone 12 Pro akateedzana: LiDAR! Izvi zvinomiririra Kuonekwa kweChiedza uye Kurongeka, uye ndiyo sensor imwechete iyo yakaita dheti yayo yepamutemo kutanga kwegore neiyo iPad Pro 2020 edition. LiDAR inosarudza madaro nekuyera kuti zvinotora nguva yakareba sei kuti chiedza chisvike pachinhu uye kuratidza kumashure, uye chinoshanda zvese mukati nekunze. Inoita kuti AR igoneke nehukuru hwakanyanya kupfuura pane chero imwe smartphone pamusika izvozvi.
iPhone 12 Pro akateedzera yepamutemo kamera sampuli
iPhone 12 Pro inotsigira RAW mafoto
Iine rutsigiro rwemuno rweRAW mafoto anouya gare gare kune iyo iPhone 12 Pro akateedzana, iyo Pro muzita inozopedzisira yatanga kuita zvine musoro.
Izvo zvitsva apa ndezvekuti iwe uchave unokwanisa kupfura RAW mafoto neiyo nyowani Apple ProRAW standard. Apple yakashanda nesimba kusanganisa kudzika kweRAW fomati pamwe nekomputa yekufambira mberi mukamera, zvinhu senge yakawanda-furemu yekugadzirisa mifananidzo mukati Yakadzika Fusion uye Smart HDR. Kuti zvibudirire izvi, yakagadzira pombi nyowani, iine CPU, GPU, ISP nezvimwe zvinhu zvinoshanda pamwechete, uye Apple ProRAW ichashanda pane ese mana mana iPhone 12 Pro makamera, kusanganisira yekutanga.
Iwe uchave unokwanisa kugadzirisa RAW mapikicha zvakananga muPikicha app, kana mune yechitatu bato maapplication, uye 3rd bato maapplication anogona zvakare kutora Apple ProRAW.
iPhone 12 Pro Vhidhiyo Kuvandudza
10-bit vhidhiyo inosvika kune iPhone 12 Pro!
Apple iri zvakare kusimbisa kutungamira kwayo muvhidhiyo yeApplemo nekugadziriswa kushoma kwekugamuchira.
Iyo nyowani iPhone Pro akateedzana ndiwo mafoni ekutanga kunyora muDolby Vision HDR, uye kutsigira 10-bit HDR vhidhiyo. Izvi zvinoreva kuti vanokwanisa kutora anopfuura mamirioni mazana manomwe emamirioni, kusvika pamakumi matanhatu emakumi emazana zvakapfuura. Iwe zvakare unowana yekutarisisa yekutarisisa yeHDR paunenge uchipfura, uye unogona kugadzirisa Dolby Vision mavhidhiyo imomo muApp photos. Izvi zvinhu zvinoyemurika zvechokwadi, zvinogoneka kuvonga kune yakasimba A14 chip.
Padivi revhidhiyo, iyo nyowani yeOIS sensor yekuchinja tekinoroji zvakare inoita mutsauko nekusimudza kugadzikana kwese, uye iwe unomhanyisa auto-kutarisa mune yakaderera mwenje nerubatsiro rweiyo LiDAR sensor.
Iyo huru sensor yeiyo iPhone 12 Pro Max inoipawo iyo mukana mune yakaderera-mwenje sezvo inobata yakawanda yakawanda mwenje.
iPhone 12 Pro 5G kubatanidza
Ose ari maviri iPhone 12 Pro uye 12 Pro Max vanotsigira iyo nyowani 5G yekubatanidza mwero, uye ivo vachashandawo neiyo inomhanya-mhanya, mmWave 5G network inoshandiswa neVerizon Wireless. Kana iwe uchigara kunze kweUnited States, zvakadaro, haugone kuwana mmWave rutsigiro.
5G inouya mumavara maviri makuru: imwe ndiyo inonzi sub6 network, senge yakaburitswa zvakanyanya neT-Mobile uye zvichibva pamatanho ari pasi peiyo 6GHz renji, uye imwe yacho mmWave, senge iyo Verizon yakaburitswa, yakavakirwa pamatanho epamusoro anopa kukurumidza kumhanya, asi pamutengo wechiratidzo chinokanganiswa zviri nyore uye kuwanikwa kunogumira kune homwe shoma munzvimbo huru dzedhorobha.
Iyo iPhone 12 Pro akateedzana ane akanyanya ma5G mabhendi eiyo chero smartphone, yakagadziridzwa antenna kurongeka, uye Apple iri Apple, yakaunza nyowani Smart Dhata Mode iyo inova nechokwadi chekuti unoshandisa 5G chete kana iwe uchiida iyo, uye iyo nguva yasara, iPhones dzinobva dzachinjira kuLTE kuchengetedza hupenyu hwebhatiri.
Verenga yedu iPhone 12 5G yakatsanangura: mabhendi uye chinyorwa chekuwanika
iPhone 12 Pro hupenyu hwebhatiri uye MagSafe!
Nepo Apple isiri kuzivisa saizi chaiyo yebhatiri mukati meaya maPhones izvozvi, inopa fungidziro yehupenyu hwebhatiri. Iyo pfupi nyaya apa ndeyekuti zvinoita sekunge hupenyu hwebhatiri hunoramba hwakafanana, kunyangwe hushoma padiki pane mamwe mamodheru. Iyo iPhone 12 Pro Max inoramba ihwo hwakaenzana hwakaenzana hupenyu hwebhatiri segore rapfuura & apos; s Max, asi iyo iPhone 12 Pro ichagara zvishoma zvishoma pakutamba kwevhidhiyo kupfuura iyo 11 Pro.
Tarisa uone maApple & apos; e epamutemo bhatiri stats yeiyo iPhone 12 akateedzera pazasi
iPhone 12 Pro Max (2020) hazvizivikanwe makumi maviri 80
iPhone 12 Pro (2020) hazvizivikanwe 17 65
iPhone 12 (2020) hazvizivikanwe 17 65
iPhone 12 mini (2020) hazvizivikanwe gumi neshanu makumi mashanu
iPhone SE (2020) 1821 mAh 13 40
iPhone 11 Pro Max (2019) 3969 mAh makumi maviri 80
iPhone 11 Pro (2019) 3046 mAh 18 65
iPhone 11 (2019) 3110 naRaama 17 65
iPhone XS Max (2018) 3179 mAh gumi neshanu 65
iPhone XS (2018) 2659 mAh 14 60
iPhone XR (2018) 2942 mAh 16 65
iPhone X (2017) 2716 mAh 13 60
Apple iri kuvandudza neisina waya kuchaja. Aya maPhones anounza MagSafe, akateedzana emagineti akatenderedza coil yekuchaja isina waya, inobvumidza machaja asina waya kuti anyore munzvimbo kwayo kuti anyatsoenderana necoil uye mhedzisiro yakanaka yekuchaja. Panyaya yekumhanyisa, iwo maProses ikozvino anotsigira tambo yekuchaja isina waya inosvika ku15W, yakapetwa kupfuura yapfuura, asi chete neMagSafe charger, nepo Qi isina waya majaja achiri kungobhadharisa mafoni nekumhanya anosvika 7.5W.
NeMagSafe, maPhones matsva ane magineti mukati mawo saka anonamira pamajaja asina waya kuti anyatso kukwana
Apple iri kuunza nhevedzano yemakesi matsva ayo anobata zvine mutsindo kufoni nekutenda kune iwo magineti, ayo akanaka.
Chimwe chinhu chitsva pane yekuchaja kumberi ...AirPowercharger nyowani isina waya inonatsa inokwidza iPhone neApple Watch panguva imwe chete, uye inopeta zvakanaka nehafu yekufamba.
Mutengo uye zuva rekuburitsa
Iyo coronavirus denda chave chiri chikonzero nei Apple yakamisa nguva yayo chiziviso che iPhone neinenge mwedzi uno gore rino, uye denda iri rakanonoka kutangisa chaiko kwePhones nyowani.
Pre-odha yeiyo 6.1 'iPhone 12 Pro modhi inotanga nekukasira, musi waGumiguru 16th, iine-muchitoro kuwanikwa kunorongedzerwa svondo rinouya, Gumiguru 23. Kuti ive chaiyo, pre-odha dze iPhone 12 Pro yakavhurwa na5: 00 am Pacific nguva, kana 8: 00 am Eastern nguva muna Gumiguru 16.
Nekudaro, iyo hombe, 6.7 'iPhone 12 Pro Max modhi inononoka uye pre-maodha ayo anongotanga munaNovember 6th, nepo zuva rekuburitsa rakagadzirirwa Nyamavhuvhu 13th. Iyo chaiyo nguva pre-yekuraira yakavhurwa iyo Pro Max iri pa5: 00 am Pacific nguva, kana 8: 00 am Eastern nguva munaNovember 6th.
Uye heino maratidziro anoita mitengo yeimwe neimwe vhezheni yeiyo iPhone 12 Pro uye iPhone 12 Pro Max:
iPhone 12 Pro 128GB: $ 1,000
iPhone 12 Pro 256GB: $ 1,100 (+ $ 100)
iPhone 12 Pro 512GB: $ 1,300 (+ $ 200)
iPhone 12 Pro Max 128GB: $ 1,100
iPhone 12 Pro Max 256GB: $ 1,200 (+ $ 100)
iPhone 12 Pro Max 512GB: $ 1,400 (+ $ 200)
Pakazara, izvi zvinoita sekukwirisa kukuru kweiyo Pro nhepfenyuro nekugamuchirwa kwakajeka kumakamera, kuchaja, girazi rakaomarara, 5G, processor inokurumidza uye iconic dhizaini. Uri kuwana imwe yadzo iwe pachako here? Uye ivo vanotarisa sei vachipesana nemakwikwi? Tiudzeiwo pfungwa dzenyu nezve iyo nyowani iPhone 12 Pro duo mune zvakataurwa pazasi!
ipad 6th chizvarwa chekuburitsa zuva
jet nhema vs nhema iphone
Maitiro ekubatanidza iyo Galaxy Cherechedzo 10 kune Windows komputa - Notices uye mameseji paPC yako!
LG G5: 10 zvinhu zvaunofanira kuziva usati (kana mushure) uchitenga imwe
LG & apos; s OLED vs Samsung & apos; s Super AMOLED: ndeapi mutsauko mutsauko?
Ungachinja sei default SMS app pa Android 5.0 Lollipop
Sprint: Tenga imwe Samsung Galaxy S7 kana Galaxy S7 kumucheto, tora yechipiri ye50% kubviswa
Android 6.0.1 inogona kugonesa LTE bhendi 12 yeNexus 5X uye 6P paT-Mobile
Yakakura Samsung Galaxy Watch Inoshanda 4 inodonhedza inoratidza yakajeka dhizaini uye mavara
Hapasisinazve kugadziriswa kwemwedzi pamwedzi kweSamsung Samsung Cherechedzo 5 uye S6 Edge +
Apple TV Anwendung kupinda zvizere nyika Android TV